Ọmụmụ nkuzi Cofttek - Ihe enyemaka Cofttek.
Onye ọ bụla chọrọ nnukwu ọrụ na agụmakwụkwọ ga-enyere ha aka ịga tere aka. Ka osi di, otutu ndi mmadu gha acho igbusi oge oru ya na ihe omuma ya. Cofttek maara mkpa agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị dị, ọ bụ ya mere anyị ji enyere aka ịkụziri ndị na-agụ akwụkwọ anyị nri Ntinye nri site na nyocha na ndụmọdụ anyị.
Akwụkwọ nkuzi Cofttek anyị bụ nkwalite ọhụụ na anyị ji oke nganga ikwusa. Ọ bụ $ 2000 agụmakwụkwọ kwa afọ nke ezubere iji nyere ụmụ akwụkwọ aka iru agụmakwụkwọ na ọrụ ha. A ga-enye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ a afọ ọ bụla iji nyere aka kwụọ ụgwọ mmefu agụmakwụkwọ. Anyị na-achọ ịba okpukpu abụọ nke agụmakwụkwọ maka afọ na-abịa.
Ego ole bụ Nkụzi maka Ihe?
Nkuzi akwukwo a gha enye umu akwukwo ihe $ 2000 iji kwụọ ụgwọ mmefu agụmakwụkwọ. Ọ bụ naanị nkuzi nkuzi na agaghị agụgharị ma ọlị. A ga-ezigara ya na ụlọ ọrụ ego.
Anyị na-achọ nwata akwụkwọ nwere ike iji ego anyị na-enye. Mụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere ike itinye akwụkwọ, ọ bụrụhaala na ha debanyere aha oge niile na ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ kọleji mahadum. Obere obere GPA (Nleta ogo Geri) iji tinye akwụkwọ maka ohere agụmakwụkwọ bụ 3.0
Youzọ Can Pụrụ Isi Mee Ya
Nwere ike itinye akwụkwọ maka ohere agụmakwụkwọ n'efu. Emebere ya ka ọ dị mfe iji ruo eru maka ma tinye maka ya. Ọ bụ naanị ụmụ akwụkwọ ole na ole ga-enwe ike itinye akwụkwọ, ọ bụ naanị ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike imeri.
Nke a bụ otu esi etinye:
Bido site na ide edemede nke mkpụrụ okwu 500 ma ọ bụ karịa banyere “Nri oriri na-eji ihe ndị ọzọ ewu ewu karịa mgbe ọ bụla”. Can nwere ike ịtụle otu mmụta ị dechara ma jiri nke ahụ kọwaa otu ọ ga - esi nyere gị aka imeziwanye nkà gị. Edemede gha gha eme ya December 31, 2020.
Ikwesiri izipu ngwa gi na [email protected] gbaa mbọ hụ na ọ dị n'ụdị Microsoft Okwu. Jiri adresị email (agụ) agụmakwụkwọ gị naanị. Ọ bụrụ n’enyefee ngwa a na PDF ma ọ bụ Google Doc, a gaghị anabata ya.
Mpempe akwụkwọ ntinye ga-agụnye ozi ndị a: aha gị, nọmba ekwentị, aha mahadum gị na adreesị ozi-e gị.
Edemede kwesiri ide ya n’okwu nke aka ya kwesiri bara uru nye onye guru ya.
Plakpochapu ọ bụla ga - eme ka ntinye gị bido ozugbo jụrụ.
Naanị nye ozi nke akọwara n’elu.
A ga-ekpebi edemede gị na okike ya, iche echiche na uru ya.
A na-enyocha ntinye ọ bụla na Jenụwarị 15th, 2021, a ga-ama ọkwa onye mmeri ma jiri ozi email mee ka ndị mmadụ mara banyere ya.
Anyị ji n'aka na enweghị ozi nkeonwe maka ụmụ akwụkwọ na-ekerịta, ma echekwara ozi nkeonwe niile maka ojiji maka ime ya. Anyị anaghị enye ndị ọzọ nkọwa nkọwa nwa akwụkwọ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla, mana anyị na-edobe ikike iji isiokwu ndị nyefere anyị n'ụzọ ọ bụla anyị chọrọ. Ọ bụrụ na i tinye edemede na Cofttek, ị na-enye anyị ikike niile maka ọdịnaya ahụ, gụnyere nwe ọdịnaya nke kwuru. Nke a bụ eziokwu ma anabatara nrubeisi gị dị ka onye mmeri ma ọ bụ na ọ bụghị. Cofttek.com nwere ikike iji ọrụ niile edepụtara ka ebipụta ya ka ọ hụrụ na ọ dabara adaba yana ebe e lere anya na o kwesịrị ekwesị.